Gen. Shire ?umadda yaan la weyrixin oo yaan la luggoyn ma jiri doono shir ka dhacaya Taleex? – Radio Daljir
Oktoobar 31, 2013 8:47 b 0
Taleex, October 31, 2013 – Madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland Gen. Cabdisamad Cali shire ayaa shir jaraa?id oo uu maanta ku qabtay degmada Taleex ee gobolka Sool, waxaa uu si cad ugu sheegay in uusan jirin shir ay leedahay khaatumo oo furmaya.
?Umadda yaan la weyrixin, halkan wax shir ah oo ka dhacaya ma jiro mana socdo, maaha in dadka la jiho jiheeyo oo la wareeriyo, waxaan leeyahay haba yaraadee ma jiro shir ka dhacaya Taleex, yaan laysku soo luggoyn.? Gen. Cabdisamad Cali shire ayaa sidaas ku yiri shir jaraa?id
Docda kale madaxweyne ku xigeenka Puntland waxaa uu wax laga xumaado ku tilmaamay hadalo ka soo yeeray qaar ka mid ah murashaxiinta u taagan xilka madaxtinimo, kuwaas oo safarkiisa ku sheegay mid dadka la isaga horkeennayo.
?Nasiib daro ayaan leeyahay murashaxiinta xilligan eedaynaya safarkayga, dastuurka dib ha loogu noqdo, arrintu Af ka wayn.? Ayuu yiri madaxweyne ku xigeenka Puntland waxaa uu hadalkiisa ku sii daray ? Marka la eedeeyo booqasho dowladdu ku tagtay deegaan, waxay ila tahay ninka taas dhaleecaynaya waa qaran dumis.?
Loolan adag ayaa xiligan ka socda deeganada Puntland kaas oo u dhexeeya murashaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo 8-da janaayo ee sanadka soo socda, madaxweyne ku xigeenka ayaa ku laabtay Taleex markii labbaad muddo labba bilood gudahood ah, safarkiisa ayaa qayb ka ah ollolaha socda.
Dhegeyso: war-bixin uu diyaariyey? Cabdiraxmaan Jaamac Xaashi (wadani) oo daljir uga soo hadla Taleex?
Baahin: Khamiis 31 Oct -2013, Caawa Iyo Daljir, Weriye Khadar Cawl Ismaaciil ~ Daljir ~ Buuhoodle